Yoga zuru oke (Sri Aurobindo) - WRSP
1872 (August 15): Aurobindo Ghose mụrụ na Calcutta, India.
1878 (February 21): Mirra Alfassa mụrụ na Paris.
1879: Aurobindo na ụmụnne ya wegara England; ọ biri na Manchester ya na ezinụlọ Bekee ruo afọ ise.
1884: Aurobindo debara aha na St. Paul School, London.
1889 (Disemba): Aurobindo meriri akwụkwọ agụmakwụkwọ klas maka ịga ụlọ akwụkwọ ndị eze, Cambridge; na June 1890 ọ gafere ule ntinye nke ndị ọrụ obodo ndị India (ICS); ọ gara Cambridge dị ka onye nyocha nke ICS ruo 1892.
1892: Aurobindo gafere ule ikpeazụ ya na nyocha ICS mana a jụrụ ya site na ICS n'ihi na ọ dara ịga nyocha ahụ.
1893-1906: Aurobindo rụrụ ọrụ na steeti Baroda nke India dị ka onye nlekọta nchịkwa, prọfesọ na Baroda College, odeakwụkwọ nke Maharaja nke Baroda, na osote onye isi nke kọleji.
1902-1910: Aurobindo nọ n'ọrụ na nnwere onwe nnwere onwe India; e boro ya ebubo ịgba ọchịchị mgba okpuru ugboro abụọ na ibuso gọọmentị agha, ma a tọhapụrụ ya n'okwu atọ ndị a.
1903-1905: Mirra Alfassa (mgbe ahụ Mirra Morisset) gosipụtara ihe osise na salons na Paris.
1903-1908: Mirra Alfassa nọ na Mouvement Cosmique, otu neo-Kabbalah dị na Tlemcen, Algeria, na Paris; n'oge a, o nyere onyinye na Akwụkwọ Cosmique.
1910 (Eprel): Aurobindo banyere ụgbọ mmiri gaa Pondicherry (mgbe ahụ ọ bụ akụkụ nke French Settlements in India), ebe ọ nọrọ ruo oge ndụ ya niile; n'etiti 1910 na 1926 ndi na-eso uzo na-abughi ndi mmadu gbakwara ya.
1912-1913: Mirra Alfassa (mgbe ahụ Mirra Richard) zutere onye isi Sufi Hazrat Inayat Khan na onye isi Baha'i 'Abdu'l-Baha na Paris.
1914 (March 29): Mirra Alfassa zutere Aurobindo na Pondicherry; ha, ya na di nke Mirra mgbe ahụ Paul Richard, wepụtara akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa, Arya, n'August.
1915 (February): Mirra na Paul Richard laghachiri France; Aurobindo weputara Arya na otu 1915 na 1921, na-ebipụta n'ime ya ihe niile ọ na-eme.
1916-1920: Mirra na Paul Richard biri na Japan; na Eprel 1920 ha bịara Pondicherry; Paul mechara laghachi France.
1916-1950: Aurobindo na-arụ ọrụ Savitri , bụ uri uri na Bekee nke dabeere na akụkọ akụkọ na Mahabharata.
1926 (November 24): Mgbe enwere ahụmahụ ime mmụọ, Aurobindo lara ezumike nká n'ime ụlọ ya, na-ahapụ obodo nke ndị na-eso ụzọ na Mirra. E lere ya anya, a na-ahụta ya dị ka ụbọchị ntọala Sri Aurobindo Ashram.
1927-1938: ashram toro n'okpuru nduzi nke Mirra (nke a maara ugbu a dị ka mama); Aurobindo (nke a maara ugbu a dị ka Sri Aurobindo) nọgidere na-akpọtụrụ ndị na-eso ụzọ ya site na akwụkwọ ozi.
1938 (November 24): Sri Aurobindo gbajiri ụkwụ ya mgbe ọ na-aga n'ime ụlọ ya; site n'oge a na otu ìgwè nke ndị na-eso ụzọ lere ya anya.
1942 (Disemba 2): Nne ahụ mepere ụlọ akwụkwọ maka ụmụaka nke ndị na-eso ụzọ.
1947 (August 15): India nwetara nnwere onwe na ụbọchị Sri Aurobindo nke iri asaa na ise.
1950 (Disemba 5): Sri Aurobindo nwụrụ.
1950-1958: Nne ahụ na-agwa ụmụaka na ndị otu ashram okwu mgbe niile, nke mechara bipụta ya Ajụjụ Ọnụ (Mkparịta ụka).
1952 (Jenụwarị 6): Nne ahụ mepere Sri Aurobindo University Center, mechara kpọọ Sri Aurobindo International Center of Education.
1955: Sri Aurobindo Ashram haziri n'ụzọ iwu dị ka Sri Aurobindo Ashram Trust.
1956 (February 29): Mama ahụ kwupụtara na "supermind" (lee n'okpuru) egosipụtala na "ikuku ụwa."
1957-1973: Mama ahụ na onye na-eso ụzọ ya na-akparịta ụka mgbe niile banyere yoga; okwu ndị a mechara bipụtara dị ka L'Agenda de Mère (Ndị nne burukwa).
1962 (August 16): Pondicherry ghọrọ akụkụ nke Republic of India.
1968 (February 28): Mama ahụ mepere Auroville, obodo mba ụwa nke dị na mpụga Pondicherry.
1973 (November 17): Mama ahụ nwụrụ.
1980 (Disemba): Ndị omeiwu India tinyere Iwu Auroville (Mberede Mberede), 1980.
1988 (Septemba): Ndị omeiwu India tinyere Iwu Auroville Foundation, 1988.
Aurobindo [Foto dị n'aka nri] rụrụ na Baroda site na 1893 ruo 1906. N'oge a, ọ na-amụ akwụkwọ ndị India na oge ochie, dere ya ọtụtụ akwụkwọ uri na akwụkwọ ọgụgụ n'asụsụ Bekee, wee malite ịhazi klọb nke ọdịbendị-ọdịbendị nke ọ tụrụ anya na ọ ga-abụ ihe ndabere nke ndị na-emegide ọchịchị mgbanwe Britain. O nweghị mmasị na Indian National Congress, mgbe ahụ otu ndị na-enweghị ike ịkwado, ruo 1905, mgbe enwere oke iwe megide gọọmentị chọrọ ka nkewa nke ógbè Bengal. N'ịga na Calcutta na 1906, ọ ghọrọ onye ndu nke ndị otu mgbagha nke Indian National Congress na mmụọ nsọ nke otu mgbanwe nke nwanne ya nwoke bụ Barindrakumar duziri, nke sonyere na ụfọdụ mbọ na-enweghị isi igbu ndị ọchịchị Britain. E jidere na 1908 tinyere Barindrakumar na ndị ọzọ so n'òtù mgbanwe ahụ, e boro Aurobindo ebubo na ha na-akpa nkata ịlụ ọgụ megide gọọmentị. Mgbe ikpe otu afọ gasịrị, a tọhapụrụ ya n'ihi enweghị ihe akaebe na Mee 1909.
Aurobindo amalitela ịmalite yoga na 1905, na mbụ iji nweta ike iji nyere ya aka n'ọrụ ya. Tupu e jidere ya na mgbe a tụrụ ya mkpọrọ, o nwere ọtụtụ ahụmahụ ime mmụọ. Mgbe obere oge laghachiri na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe a tọhapụsịrị ya n'ụlọ mkpọrọ, ọ hapụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji tinye oge ya n'ogo yoga. N'elu ụgbọ mmiri n'okpuru aha a na-akpọ aha iji zere ijide n'aka British, ọ rutere Pondingherry, ọdụ ụgbọ mmiri dị n'ebe ndịda India bụ nke nọ n'okpuru oge France, n'April 1910. N'afọ anọ sochirinụ, ọ nọgidere na-ahụ anya, na-etinye uche na yoga, n'ịmụ ihe, na ederede (Aurobindo 2006; Heehs 2008).
Ndị nne Mirra Alfassa abụghị ndị Juu Sephardic ndị kwagara Paris si Alexandria, Egypt, na 1877, otu afọ tupu amụọ Mirra. Onye gụrụ akwụkwọ na nzuzo, ọ mụrụ akwụkwọ nka na Académie Julian wee lụọ onye na-ese ihe, Henri Morisset, na 1897. Di na nwunye ahụ kwagara na okike okike, ịmata Auguste Rodin, Anatole France, na ndị ọzọ na-ese ihe na ndị edemede. Ha na-agakarị otu ndị ejikọtara na mgbaasị mgbaasị nke France, ọkachasị Mouvement Cosmique, nke Max Théon hiwere (nke amụrụ dika Eliezer Mordechai Bimstein na Poland gburugburu 1850), na nwunye ya (amụrụ Mary Ware na England na 1839) na Tlemcen, Algeria , na 1900 (Huss 2015; Heehs 2011). N'adịghị ka Theosophical Society na otu ndị ọzọ chọrọ mmụọ nsọ maka ọmarịcha mmekọrịta Ọwụwa Anyanwụ ,wa, Mouvement Cosmique jigidere “ụkpụrụ nke Ọdịbendị nke Anwansi.” Ndabere nke nkuzi ya bụ Lurianic Kabbalah, nke a kpaliri site na mkpali na anwansi nke Madame Théon. Mouvement Cosmique nwere alaka ụlọ ọrụ na Paris, Mirra sokwa na ọrụ ya n'etiti 1903 na 1908. N'otu oge ahụ ọ gara Théon na nwunye ya ugboro abụọ na Tlemcen. Na Paris, ọ kpọrọ ndị otu mkparịta ụka ya, nke a na-akpọ Idéa. N’otu n’ime nzukọ ya, ọ zutere onye ọka iwu na onye edemede Paul Richard, onye mechara bụrụ di ya nke abụọ. Na 1910, Paul Richard gara Pondicherry iji zọọ oche Indian Indian na Chamber of Deputies. Ọ kwụsịrị ntuli aka ahụ, mana tupu ọ laghachi na Paris, ọ zutere Aurobindo Ghose, bụ onye ya na ya nọ. N'etiti 1910 na 1913 ya na Mirra zutere ndị nkuzi mmụọ nke Ọwụwa Anyanwụ, dị ka onye isi Sufi Hazrat Inayat Khan na onye isi Baha'i 'Abdu'l-Baha, na Paris (Heehs 2008).
Na 1914, Paul Richard garaghachi na Pondicherry, nke oge a na Mirra. Mgbe ọ kwụsịrị ịga nke abụọ iji họpụta ya na Chamber, Paul kwuru na ya na Aurobindo bipụtara akwụkwọ akụkọ ihe ọmụma na Bekee na French. Aurobindo nakweere, na akwụkwọ akụkọ ahụ, Arya, malitere na August 1914, ọnwa nke Agha Ụwa Mbụ dara. Ọnwa ise mgbe e mesịrị, Pọl gbakọtara, ya na Mirra laghachiri France. Paul ama aka iso ndinyene utom ke Japan, ndien enye ye Mirra ama ada isua ekọn̄ do. Ka ọ dị ugbu a, Aurobindo wepụtara Arya ya onwe ya. Na April 1920, Pọl na Mirra laghachiri India. Paul ama ọwọrọ aka France ke ndondo oro; Mirra nọgidere na Pondingryry dịka onye na-eso ụzọ Aurobindo.
E nwere n'oge a ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị iri na abụọ bi na Pondicherry dị ka ndị na-eso ụzọ Aurobindo. Ọ zutere ha na mgbede ma soro ha kwurịta okwu banyere isiokwu dị iche iche, ọtụtụ n'ime ha abụghị ndị mmụọ. Ọ bụrụ na ha gosipụtara mmasị na nkà ihe ọmụma ime mmụọ, ọ tụrụ aro ka ha gụọ ihe odide ya na Arya. Ọ bụrụ na ha kwuru na ha chọrọ ime yoga, ọ gbara ha ume ka ha tụgharịa uche mana ha anaghị edozi oge ọ bụla. Mirra pụtara dị ka onye mbụ na-eso ụzọ ya, ụfọdụ n'ime ndị ọzọ wee malite ịgakwuru ya maka nduzi. Aurobindo mesịrị mara ọkwa na ọ bụ onye nha anya n'ụzọ ime mmụọ, na mgbe ọ lara ezumike nká mgbe ọ chọtara ahụmahụ ime mmụọ dị mkpa na November 24, 1926, Mirra weere dịka onye ndú nke obodo, nke a bịara mara dị ka Sri Aurobindo Ashram. (Aurobindo enweghị mmasị maka ụlọ ọrụ gọọmentị ma nakweere aha ashram "n'ihi na ọ chọghị ka mma" (Aurobindo 2006)). N'oge a, a mara Mirra dịka mama, mgbe Aurobindo bịara mara Sri Aurobindo.
N'etiti 1927 na 1938 Sri Aurobindo dere ọtụtụ puku akwụkwọ ozi nye ndị na-eso ụzọ ya, nke mechara mejuo mpịakọta asaa buru ibu. Ka ọ dị ugbu a, Mirra na-elekọta mmepe nke ashram n'ime ọgbakọ ime mmụọ nwere ọtụtụ akụkụ. A na-atụ anya ka ndị otu na-arụ ọrụ ọtụtụ awa kwa ụbọchị na ọrụ ashram (kichin, ịsa akwa, nrụzi na ndozi, wdg). Ewezuga nke a, ọ nweghị ọrụ iwu. Ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-atụgharị uche ma mụọ ihe odide na okwu Sri Aurobindo na mama. Ọtụtụ sonyekwara na mmemme ọdịbendị, dịka edemede, eserese, na ịbụ abụ. Ndị gurus ahụ gbara onye ọ bụla ume ịchọta ụzọ nke aka ya na ịmalite mmekọrịta ya na Chineke. Ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ na-etinye aka na Sri Aurobindo na mama n'onwe ha. Ha abụọ nyere darshan ma ọ bụ ikiri mmadụ atọ (mgbe e mesịrị ugboro anọ) kwa afo, mama m na-elekọta ihe gbasara mkpokọta na ọrụ ndị ọzọ. Ashram na-eto site na mmadụ iri abụọ na ise na 1926 gaa gburugburu 150 na 1933. Mgbe 1934 gasịrị, a gbara ndị na-etinye akwụkwọ maka ume ka ha rụọ ebe ha bi. Ụfọdụ n'ime ha guzobere obodo na ihe atụ nke ashram, ma Sri Aurobindo na nne ahụ ebughị ibu ọrụ maka ndị dị otú ahụ ma ha agbalịghị ịgbasawanye ọrụ ha na-abụghị Ọhịa. Ha weere ashram dị ka "ụlọ nyocha" maka mmepe nke ụdị mmadụ ọzọ ma chee na uto dị ukwuu agaghị akwado usoro a (Aurobindo 2011).
Mgbe agha nke Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị, Sri Aurobindo na mama m kwere ka ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-abụghị ndị chere na ha nwere egwu otú ndị agha Japan si abanye na ọdụ ụgbọ mmiri. Ụfọdụ n'ime ha kpọtara ụmụ ha. Nne ahụ mepere ụlọ akwụkwọ na 1942 ma guzobe usoro mmemme nke mmụta uche na nke anụ ahụ. Ya na Sri Aurobindo agatụghị agba ndị na-eso ụzọ ha ume ime hathayoga (postures na iku ume omume). O chere na ndị India nke oge a nwere mkpa dị ukwuu maka ụdị mmega ahụ, dị ka egwuregwu, egwuregwu na igwu mmiri, ọ haziri maka owuwu egwu, ogige tennis, ogige basketball, na ihe ndị ọzọ. N'oge na-adịghị anya ndị okenye toro eto, yana mama m, na-ekere òkè na mmemme agụmakwụkwọ ahụ ashram [Foto dị n'aka nri].
Sri Aurobindo anọwo na-agagharị n'ime ụlọ ya, mgbe ụfọdụ ruo ọtụtụ awa n'otu oge. Na 1938, ọ gbapụrụ ma kụjie ụkwụ ya ma dinara ya n'ihe ndina ya ruo ọtụtụ izu. N'oge a, a họọrọ otu ìgwè nke ndị na-eso ụzọ ilekọta ya. Ruo afọ ole na ole, ya na ha na-ekwurịta okwu kwa ụbọchị: nke a bụ nke mbụ ya na ndị na-eso ụzọ ya na-akpa kemgbe 1926. Na oge a, ọ malitere iweghachi ma rụghachi ọrụ ndị o dere maka Arya n'etiti 1914 na 1921. Ọ gwakwara ya Savitri , bụ uri uri na Bekee nke ọ malitere na 1916. E bipụtara ya na mpịakọta abụọ na 1950 na 1951.
Sri Aurobindo nwụrụ na Disemba 5, 1950 n'ihi ọrịa akụrụ na-ebute site na ịbawanye nke prostate. Ọ jụrụ ọgwụgwọ ọ bụla na-emerụ ahụ. Mgbe ọ nwụsịrị, mama m nọgidere na-elekọta ashram. Na Jenụwarị 1952, ọ malitere Centerlọ Ọrụ Mahadum Sri Aurobindo, mechara kpọọ Sri Aurobindo International Center of Education, nke na-enye ugbu a klas site na ụlọ akwụkwọ ọta akara na ọkwa kọleji. N'oge 1950s mama m na-agwa ụmụ akwụkwọ na ndị ashram okwu mgbe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ na-ekwu okwu banyere mmeghachi omume nke mmụọ ya, nke ọ hụrụ dị ka ịga n'ihu nke mgbalị Sri Aurobindo imeghe ụzọ maka mgbanwe mgbanwe nke ndụ n'ụwa. N'afọ ndị sochirinụ, ọ kọrọ ọganihu na omume nke ya nke yoga nke mgbanwe na mkparịta ụka ya na onye na-eso ụzọ, nke mechara bipụta Ebumnuche Nne (Nne 1979-1982). Na 1968, Nne ahụ mepụtara Auroville, mba ụwa dum chọrọ "ịghọta ịdị n'otu mmadụ" (Nne 2004).
Mama m nwụrụ na November 17, 1973, mgbe ọ dị afọ 95. Ọ họpụtaghị onye ga-anọchi ya. Otu ntụkwasị obi e guzobere na 1955 weere nlekọta nke ashram, nke nọgidere na-eto ma na-agbasa. N'ihe banyere 2016 ọ na-enwe gburugburu ndị òtù 1,500 oge zuru oke. Ọtụtụ puku "ndị na-efe ofufe" bi n'ógbè ndị gbara ya gburugburu nakwa n'obodo ndị ọzọ India na mba ọzọ. Ọtụtụ na-eleta ashram ugboro ugboro ma na-ekere òkè n'ọrụ ya. Ndị na-efe ofufe na ndị ọzọ haziri usoro ọmụmụ onwe onye na ndị Sri Aurobindo na ndị nne na India na mba ndị ọzọ. Ndị a enweghi mmekọrịta chiri anya na ashram, nke enweghị alaka ma ọ bụ nzukọ ọ bụla ma ọ bụ mba ọ bụla. Obodo nke Auroville, nke na-enweghị njikọ iwu ma ọ bụ nhazi na ashram, Gọọmentị India nwere na 1988 weghaara ya iji jide n'aka njikwa kwesịrị ekwesị. (Maka nkọwa dị n'okpuru n'okpuru ndu / nzukọ). Ndị obodo ahụ nọgidere na-azụlite site n'ike mmụọ nsọ nke Sri Aurobindo na mama. Ugbu a, ọ nwere ndị na-anọchite anya 2,500, nọchitere ihe karịrị mba iri anọ (Census - Auroville Population 2016).
N'ikwu okwu n'ozuzu, nkà ihe ọmụma Sri Aurobindo bụ ngwakọta nke usoro ihe ọmụma nkà mmụta oge ochie nke India nke Vedanta nwere echiche ụfọdụ na-ejikọta ya na oge ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, dị ka evolushọn, ọganihu na mmadụ n'otu n'otu. Vedanta nke oge ochie, otu n'ime usoro ihe omimi isii nke ndị India, bụ nke dabeere na nkuzi nke Upanishads, na Bhagavad Gita, na ihe odide Sanskrit ndị ọzọ. Otu n'ime echiche ndị bụ isi nke Vedanta bụ (1) na eluigwe na ala bụ ngosipụta nke otu Nanị, a kpọrọ brahman ; (2) na onye ọbụla bụ isi atman ma ọ bụ onwe; na (3) nke ahụ atman yiri ya brahman, nke putara na mmadu n'otu n'otu nwere ike imeta onodu ya na ezi ihe kachasi, mgbe ufodu ka aturu ya dika ishwara ma ọ bụ Onyenwe Eluigwe na Ala. (Okwu India ishwara dị ka Western "God" nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ. Sri Aurobindo na mama m na-ejikarị okwu bụ "Chineke" mgbe ọ na-ekwu banyere Chineke ma ọ bụ Onyenwe anyị.
Okwu Sanskrit maka otu bụ yoga. Na nkà ihe ọmụma, yoga bịara bụrụ usoro nke nkuzi na omume ndị dị na Patanjali Yoga Sutra. N'okwu sara mbara karị, yoga na-ezo aka n'omume nile nke mmadụ nwere ike ime ka ya na ya dị n'otu brahman ma ọ bụ gaa na ntụziaka ahụ. N'ikpeazụ, a na-etinye usoro nke yoga n'ụdị atọ: (1) ndị na-adabere na ọrụ a tụrụ anya dị ka ọrụ na-enweghị isi nye Chineke ( karma-yoga ma ọ bụ yoga nke ihe), (2) ndị na-adabere na omume uche dị ka ntụgharị uche (jnana-yoga ma ọ bụ yoga nke ihe omuma), (3) ndị na-adabere na nraranye ishwara amụrụ ime dị ka chi nke chi (bhakti-yoga ma ọ bụ yoga nke ofufe). Ụfọdụ ndị ọchịchị na-ekwupụtakwa ụdị nke anọ nke omume ndị na-adabere na anwansi iji mee mgbanwe onwe onye. Na usoro a maara dika raja-yoga , a na-ejikọta mgbanwe a na ike pụrụ iche ma ọ bụ siddhis, dị ka a kọwara na Yoga Sutra. Na Sri Aurobindo yoga, mgbanwe na-abịa site na ọrụ nke ike Chineke ma ọ bụ shakti, dị ka akọwara na Tantras.
Sri Aurobindo kpọrọ usoro ya dum Yoga n'ihi na ọ na-emepụta ma ọ bụ na-ejikọta ụzọ nke usoro ụzọ anọ nke yoga, nke ọ kpọrọ yoga nke ọrụ Chineke, yoga nke ihe ọmụma dị mkpa, yoga nke ịhụnanya Chineke, na yoga nke izu okè . O bu ụzọ jiri okwu bụ "Yoga zuru ezu" na Njiko nke Yoga na September 1914. (Na 1913, ọ na - eji otu Sanskrit mee ihe, purna yoga, na edemede.) (Aurobindo 1999; Aurobindo 1997a). Na Njiko nke Yoga ọ kọwara na isi ihe yoga bụ "ntụgharị nke otu ma ọ bụ ike nile nke nghọta mmadụ anyị ka anyị wee nwee ike ịbịaru Chineke." N'akuku ụzọ omenala atọ, "otu isi ikike nke ịbụ ma ọ bụ otu otu ike ya bụ mee ihe, "mgbe a na-emepụta yoga" ma ọ bụ jikọtara ya niile "a ga-ejikọta ike niile ma tinye ya na ngwá ọrụ na-agagharị." Yoga nke ọrụ, ya na ikike nke isi ya; yoga nke ihe omuma, ya na isi ike nke amamihe; na yoga nke ntinye ofufe, ya na ike nke isi ya, ka a ga - ebuli elu site na "uche n'eme ihe zuru oke nke ime mmuo na nke supramental," na - eme ka ndi mmadu nwee ike ime ka mmadu zuo oke. (Aurobindo 1999).
Ntube na supramental bụ okwu ndị Sri Aurobindo mere ka ha kọwapụta ọkwa dị elu karịa uche nkịtị. N'okpuru ihe omumu ya, "ala miri ala" bu ihe, ndu na uche, ebe "elu elu uwa" bu ihe omuma na obi uto (nke Vedanta mara dika sat-chit-ananda ). N'etiti n'azụ abụọ ahụ bụ ihe dị elu, na-ezo aka na ụfọdụ Upanishads dị ka vijnana. Supermind bụ njikọ dị ike dị n'etiti ọkwa ime mmụọ nke ịmụrụ-nchekasị na ọkwa dị ala-ndụ-uche. Sri Aurobindo lere ngosipụta nke cosmos anya dị ka usoro abụọ nke ịbanye na mgbanwe. Ndụ na uche, nke “so na” ihe, si na ya pụta site na ntanetị nke osisi, anụmanụ na ndụ mmadụ. Onye isi, tinyekwara ma ọ ka dị n'okwu, ga-agbanwe site na onye nnọchi anya nke ndị isi ma ọ bụ ndị gnostic. Ngosipụta zuru oke nke nnukwu uche ga-eweta mgbanwe nke okwu, ndụ na uche ma mepee ndụ nke Chineke nke "ndị gnostic" ga-emekọrịta ihe na ibe ha "na ndị gnostic obodo ma ọ bụ obodo." (Aurobindo 2005). N'ime akwukwo yoga nke o debere n'agbata 1912 na 1920 na ozo na 1927 Sri Aurobindo dere na ya na-arigoro onu ogugu nke omuma di n'etiti uche na uche (Aurobindo 2001). Afọ ole na ole ka e mesịrị, o dere na ọkwa kachasị elu nke ọkwa ndị a, nke ọ kpọrọ oke, abanyela n'ahụ ya na 1926. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gbalịsiri ike ịrịgo n'ime nnukwu mmụọ na iweda ya n'okwu. Mgbe mama ya nwụsịrị na 1950, mama m gara n'ihu na yoga a. Na 1956, ọ kwupụtara na nnukwu anụ ahụ agbadata na mbara ụwa (Mama 2004). Mgbe e mesịrị ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya na ike karịrị ike na-arụ ọrụ n'ime ahụ ya ịgbanwe ya.
Sri Aurobindo na Nne ahụ agbaghị ndị na-eso ụzọ ha ume ịkọwa banyere ọdịda nke mmelite ahụ, ngbanwe nke anụ ahụ, na ihe ndị ọzọ. Ọ dị mkpa ka ha mara na ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke yoga bụ mgbanwe nke ndụ mmadụ na mkpokọta, ọ bụghị, dịkwaka na Vedanta ọdịnala, ụzọ mgbapụ si samsara , na karma -agbagha nke ọmụmụ na ọnwụ. Mana tupu mmadu enwee ike iche echiche banyere ibili elu ma obu ime ka ike ya di n'ime ha, ha aghaghi igbadebe nkwadebe ogologo oge. Nke mbu abia ihe omumu nke anu aru na nke uche di ka ihe dika ihe ndi ozo di iche iche nke okpukpe na nke ime. Ihe na-esote omume nke yoga n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-ekwu okwu, na-amalite site ụzọ atọ nke ọrụ, ihe ọmụma na nraranye. N'okwu dị irè, ụzọ ọrụ pụtara ịme ihe niile n'emeghị ọchịchọ, dị ka akọwapụtara site na Bhagavad Gita. Ụzọ nke ihe ọmụma gụnyere ịmalite ịchịkwa ọrụ nke uche site na itinye uche ma ọ bụ ntụgharị uche, ebe ụzọ nraranye na-adabere n'ịmepụta mmekọrịta onwe onye na Chineke ma ọ bụ guru. Ọtụtụ ndị na-eso Sri Aurobindo na Nne na-ele ha anya dị ka ndị avatars ma ọ bụ ntinye Chineke ma na-asọpụrụ ha. Ọ bụ ezie na ha adịghị agbasi mbọ ike ka ha nakweere nkwenkwe na ịgba ọsọ, Sri Aurobindo gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-edo onwe ha n'okpuru Nne ahụ ma kwe ka o duzie ha n'ime.
Sri Aurobindo weere otu okwu dị mkpa nke nkà ihe ọmụma ya abụghị omenala India kama ọ bụ ọdịnala esoteric Western nke Mama mụọ tupu ya abịa India. Okwu a bụ ịbụ psychique ma ọ bụ "ịchọrọ uche," bụ nke kwekọrọ na "ọkụ sitere n'aka" nke ụlọ akwụkwọ nke Kabbalah nke Isaac Luria zụlitere na Palestine na narị afọ nke iri na isii. (Echiche nke mgbawa Chineke na-apụtakwa na ọdịnala ime mmụọ ndị ọzọ caitya purusha nke okpukpe Hindu mgbe ochie.) (Heehs 2011). Dabere na Sri Aurobindo, mmụọ ọgụgụ isi na-echekwa mmetụta nke ahụmịhe onye ọ bụla ka ọ na-esite n'otu ndụ gaa na nke ọzọ. Ndi mmadu bu ihe mejuputara n'ime ma obu ihe omimi na nke ozo ma obu oke ihe. Uche nke uche bu nke kachasi n'ime ya, ya na Chineke. Otu ihe dị mkpa nke Sri Aurobindo yoga bụ ka onye ọ bụla mee ka kọntaktị ya na mmụọ ya wee zaghachi ya.
N'akwụkwọ ozi ndị o degaara ndị na-eso ụzọ, Sri Aurobindo kwuru kpọmkwem ọtụtụ ọnọdụ na àgwà dị n'ime ya na ndị chọrọ ịgbaso yoga kwesịrị ịzụlite. Ndia bu ntọala nke ya sadhana ma ọ bụ omume yoga. Ihe ka mkpa bụ udo nke obi (shanti) tinyere ọnọdụ nke nnwere onwe pụọ ná nsogbu ( samata ) na-eduga n'inwe obi ụtọ nke obi (sukham). Na mwute ma ọ bụ onye ọrụ aghaghị ịmụta inwe okwukwe na Chineke. Nke a abụghị nkwenye uche, ma ihe a na-akpọ na Sanskrit shraddha, mkpụrụ obi “nkwenye siri ike na nnabata” nke “ịdị adị, amamihe, ike, ịhụnanya na amara nke Chukwu.” Sadhakas ga-amuta itinye onwe ha na uche na nduzi nke Chineke n'enyeghi aka na echiche ha. Ha kwesịrị ịchọ amara na nkwado nke Chukwu, na-ajụ mmegharị ndị na-eduga n'ụzọ, dị ka ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, ọchịchọ na iwe. N'ikpeazụ, ha kwesịrị inwe ndidi, na-atụghị anya nsonaazụ bụ isi na ụbọchị ole na ole ma ọ bụ ọbụna iri afọ ole na ole (Aurobindo 2013).
Dị ka Sri Aurobindo na mama m si kwuo, omume yoga bụ ihe gbasara mmadụ. Onye ọ bụla mwute Ọganihu nke naanị ya masịrị ya, guru na Chi. Ha akwadoghị ọrụ ọgbakọ, mana ha jụrụ sadhakas na-arụkọ ọrụ ọnụ n'udo, na-amụta otu esi ejikwa akara ha achịkwa. Nke a bụ isi ihe kpatara ya, ma e wezụga nlekọta nke ndụ ashram, na mama m ma nye onye ọ bụla ọrụ. N'elu elu, ya na Sri Aurobindo na-atụ anya ntọala nke ime mmụọ na, n'ikpeazụ, obodo ndị nwere ike ịkọwa okwu nke Chineke na ndụ. Ha nwere olile anya na ashram ga - aburu ihe nlere anya nye ndi obodo a ma ha lere anya ngbaghara nke ndu obodo dika ihe egosiputa nsogbu ndi agha aghaghi ime tupu ha emebe ndi ime mmuo na ndi isi. Mgbe mama ahụ guzobere Auroville na 1968 ọ bu n'obi ka ọ bụrụ "saịtị nke nyocha ihe onwunwe na nke ime mmụọ maka ọdịdị nke ịdị n'otu nke mmadụ n'ezie" (Mama 2004).
Sri Aurobindo na mama m anọghị n'okpukpe ọ bụla, n'ihi ya, ọ kwadoghị ememe okpukpe, dị ka pujas nke ndị Hindu a ma ama. N'aka nke ọzọ, ha kwenyere na ọtụtụ ndị nwere mkpa ịkọwa ha n'ihu okpukpe ma ọ bụ mmetụta ime mmụọ. Ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ha sitere na Hindu, ha na-ahapụkwa ha ka ha kwuo ofufe ha na Hindu omenala, dịka ọmụmaatụ pranam ma ọ bụ prostration na site na ịga darshan ma obu ihu oha. Mgbe Sri Aurobindo lara ezumike nká, mmadụ atọ (emesịa anọ) kwa afọ darshan bụ nanị oge ndị na-eso ụzọ ya, na ndị ole na ole a họpụtara ahọpụta, pụrụ ịhụ ya. Ha na-aga n'ihu ya na mama m, na-ewe sekọnd ole na ole ime pranam n'ihu ha. Ruo ọtụtụ afọ, mama m nyere darshan N'ebe ututu; mgbe e mesịrị na n'oge pụrụ iche. Ememe nke darshan gara n'ihu ọbụna mgbe Sri Aurobindo na mama m gafere. N'ụbọchị anọ pụrụ iche [ụbọchị ọmụmụ nke nne (February 21), ụbọchị ọ ga-alaghachi azụ na Pondicherry (Eprel 24), ụbọchị ọmụmụ ụbọchị Sri Aurobindo (August 15) na ụbọchị nke mbido nke iwegharị na 1926 (November 24) ma ndị ọbịa na-esi n’ụlọ nke otu ma ọ bụ ha abụọ agafe. Enwere darshan pụrụ iche kwa afọ anọ ọ bụla iji mee akara ọdịda nke supermind ahụ, nke mere na February 29, 1956. N'ime afọ ndị mbụ nke ashram, mama m na-elekọta ihe omume emume nke enyere iji nyere ndị na-eso ụzọ aka ido ndụ ha nsọ Chi. Ruo nwa oge ọ na-ekesa ofe nke ọ lekwasịrị anya n'ememe dị nsọ. Ọ duru ndị na-atụgharị uche na otu ma na-elekọta otu pranam ememe. Sri Aurobindo dị iche n'etiti ọrụ ndị dị otú ahụ, nke nwere "ihe dị ndụ," site na "ụdị ochie ndị nọgidere na-agbanyeghị na ha abaghị uru," dị ka ememe Hindu nke sraddh (onyinye ndị nwụrụ anwụ). N'ụzọ yiri nke a, Ndị Kraịst ma ọ bụ ndị Alakụba na-eme yoga nwere ike ịchọta ụdị ekpere ha tolitere na "ọ ga-ada ma ọ bụ ihe ọzọ [ịghọ] ihe mgbochi ọbịbịa nke ha sadanna" (Aurobindo 2011).
Akwụkwọ Sri Aurobindo na yoga, dịka Njiko nke Yoga na Akwụkwọ edemede na Yoga, jupụtara na omume ndị ọ na-atụ aro ka ụmụazụ ya yoga; ma ọ dịghị mgbe ọ na-ahọrọ usoro ma ọ bụ usoro nke onye ọ bụla ga-eso. Na Njikọ na na akwụkwọ ozi o debere ụkpụrụ nke ụzọ ya ma dee usoro omume niile nke onye ọ bụla nwere ike ime mgbanwe maka ọnọdụ nke ya sadhana n'okpuru nduzi nke elu ma ọ bụ n'ime guru. Ọ nakweere, dị ka ndabere, ụkpụrụ nke Vedanta (n'etiti ha brahman, atman, na ishwara) na omume nke ụzọ atọ omenala yoga (karma-yoga, jnana-yoga na bhakti-yoga). Nye ndị a, ọ gbakwunyere ụfọdụ n'ime ụkpụrụ na omume nke nkà mmụta Tantric na yoga, karịsịa shakti ma ọ bụ ike nke Chineke, nke a na-ewere dị ka ike okike na-arụ ọrụ na mbara igwe na onye ọ bụla. Yoga zuru ezu, ka o dere, "malite na usoro Vedanta ka ọ batara na Tantra." Chineke shakti bụ "isi ihe dị na nchọta nke mmụọ," ya mere, "nrụgide mbụ na-arụ ọrụ nke Shakti edemede ahụ na ụzụ nke ahụ na ebe obibi ya." Usoro a chọrọ ijiri Chineke na Shakti Shakti, onye ndị ashram tụụrụ anya n'ụdị Sri Aurobindo na mama. Site na nke a, "Chineke n'onwe ya ... ga-eji ìhè nke ọnụnọ ya na nduzi mee ka mmadu zuo okè na ike nile nke Nature maka ndụ Chineke." (1999).
Sri Aurobindo na akwụkwọ ozi ya na mama m na akwụkwọ ozi na mkparịta ụka na-atụ aro omume ndị nwere ike inyere onye ọ bụla aka: onye a kwesịrị itinyekwu uche na ọrụ, na mmadụ kwesịrị ịtụgharịkwu uche na ihe ndị ọzọ. Mana ihe onye obula nke sadhana bu n'aka Chineke na Shakti. Site na ochicho ha na site n'inwe mkparita obi, onye ahu gha eweputa ikike ime ezigbo mkpebi na yoga na ndu.
Kemgbe ọnwụ Sri Aurobindo na mama m, ndị otu ashram na ndị na-eso ụzọ n'èzí anọgidewo na-eme yoga n'akụkụ usoro abụọ ahụ guzobere n'oge ndụ ha. Enwere nkwenye n'ozuzu na Sri Aurobindo na mama nọ n'ebe ndị ahụ na-achọ ha nọ nakwa na nduzi ha dịịrị ndị niile meghere onwe ha. Na mgbakwunye, akwụkwọ ha dị maka ndị niile nwere mmasị ịgụ ha. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị nọ na ashram na Auroville echewo ihu na akụkọ Sri Aurobindo Savitri dị ka isi iyi nke mmụọ nsọ na nduzi (Aurobindo 1997b). Otu otu dị na Auroville na-ekesa nke nne burukwa, nke ha na-ele anya dị ka isi ihe yoga nke mgbanwe ahụ. Ma n'Auroville ma ọ bụ ashram enwere omume ma ọ bụ mmemme ọ bụla, ma ọtụtụ ndị òtù ashram na ndị nleta na-aga ntụgharị uche ugboro abụọ kwa izu na ama egwuregwu ashram (ebe mama ya na-enyekarị ọgụgụ na okwu) yana ntụgharị uche na isi ụlọ ashram na ụbọchị ndị ọzọ. Anọ kwa afọ darshan adọta ọtụtụ puku ndị ọbịa. Na Auroville bụ isi yoga bụ Matrimandir (n'ụzọ nkịtị, ụlọ nsọ nke Nne), nnukwu ụlọ ntụgharị uche emebere nke edoziri dịka ntuziaka Nne. [Foto dị n'aka nri] Specialbọchị ndị pụrụ iche dịka ụbọchị ntọala Auroville (February 28) bụ akara ememme ọha.
N'ime oge Sri Aurobindo na mama, ndị otu ashram nabatara ha abụọ dị ka ndị nduzi mmụọ yana ndị nduzi nke ndụ mpụga nke obodo. A gwara ya ka o dee banyere ọnọdụ iwu nke ashram na 1934, Sri Aurobindo zara na ashram bụ nanị "ụlọ ma ọ bụ ụlọ nke Onye Ozizi ma ọ bụ Nna-ukwu nke nkà ihe ọmụma mmụọ nke ọ na-anabata ma nọrọ n'ụlọ ndị na-abịakwute ya maka nkuzi na omume . ” A pụghị ile ashram ya anya dị ka “nzukọ okpukpe” n'ihi na ndị nọ na ya “sitere n'okpukpe niile ma ụfọdụ enweghị okpukpe.” Enweghị “nkwenkwe ma ọ bụ usoro nkwenkwe, ọ dịghị òtù okpukpe na-achị isi.” Principleskpụrụ nduzi bụ nke ya na nkuzi mama, nke gụnyere "ụfọdụ omume uche nke ịta ahụhụ na ntụgharị uche, wdg, maka ịbawanye nghọta" (Aurobindo 2006). Ọ lere mama ahụ anya dị ka onye ya na mmụọ ya ma jụọ ndị otu ashram ka ha bịakwute ya. Ya mere, mgbe ndị na-eso ụzọ degaara Sri Aurobindo akwụkwọ ozi ha gwara mama ahụ. N'adịghị ka Sri Aurobindo, bụ onye na-anaghị ahụ ụzọ n'ime ụlọ ya, mama m na onye ọ bụla na-eso ụzọ na-emekọ ihe (ọkachasị mgbe ashram pere mpe) ma lekọta nkọwa niile nke ndụ ashram. O nyefere ọrụ n'aka ndị isi nke ngalaba (ubi, kichin, ọrụ owuwu ihe, ọbá akwụkwọ, akwụkwọ obibi akwụkwọ, ihe ịchọ mma, wdg), bụ ndị kọọrọ ya ozugbo.
Ewezuga ibipụta akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ, Sri Aurobindo na mama ahụ agbalịghị ịgbasa ashram, etinyeghị aka na ụdị ọ bụla nke ime ntọghata, ma jụ ọtụtụ n'ime ndị dere dere na-ajụ ma ha nwere ike ịbụ ndị otu. Ọ dịghị onye n'ime ha chere na mmụba ọnụọgụgụ dị mkpa. "Ọ dịghị ihe dabere na ọnụọgụgụ," Sri Aurobindo dere na 1934 nye onye na-eso ụzọ nke chere na ọnụọgụ dọtara na yoga nke Sri Aurobindo agaghị emegide nke okpukpe ụwa. Okpukpe Buddha na nke Iso werezọ Kraịst dị nnọọ ukwuu n'ihi na ihe ka ọtụtụ n'ime ha kwupụtara ya dị ka ụkpụrụ okwukwe n'emeghị ka ọdịiche nke ndụ ha dịrị na mpụga. Ọ bụrụ na nghọta ọhụrụ ahụ nwere afọ ojuju na nke ahụ, ọ nwekwara ike ọ na-adịrịkwa mfe mfe inye nsọpụrụ na nnabata ụwa niile. Ọ bụ n'ihi na ọ bụ nghọta ka ukwuu, Eziokwu-nghọta, na ọ ga-ekwusi ike na ezigbo mgbanwe "(Aurobindo 2011). Ha ewepụtaghị ashrams alaka ma ọ bụ weghaara ọrụ maka ndị na-efe ofufe n'èzí ashram bidoro n'onwe ha.
Mgbe Sri Aurobindo nwụrụ na 1950, onye ndu nke ime mmụọ na nke ihe onwunwe nke ashram gafere mama. Ọ nọgidere na-agba ọsọ na ya, ma ọ malitere ụlọ ọrụ ole na ole, dịka Sri Aurobindo University Center (emesia weghachite Sri Aurobindo International Center of Education). Na 1955, o degharịrị Ashram ka ọ bụrụ ntụkwasị obi iji jide n'aka na ọ ga-aga n'ihu na iwu. Ụlọ mbụ nke Sri Aurobindo Ashram Trust gụnyere ya na ndị na-eso ụzọ anọ nke nhọrọ ya. Kemgbe ọ nwụrụ, ndị nnọchianya a họpụtara ndị nnọchianya ahọpụtala. Dị ka ọrụ ebere ebere ọha na eze, ashram na-enwe afọ ojuju n'ụtụ isi dịka iwu nke India si dị. Ihe ka ukwuu n'ime ego ya sitere n'aka onyinye afọ ofufo site n'aka ndị na-efe ya. Ndị ahụ na-atụkwasị obi na-ahụ maka ngalaba na-arụpụta ọrụ (ọrụ ụlọ, akụkụ akwụkwọ, na ihe ndị ọzọ) na-ekenye uru ashram.
Mgbe mama m tụụrụ ime obodo nke ga-abụ Auroville, o nyefere mmepe ya na Sri Aurobindo Society (SAS), otu ndị na-etinye ego na Calcutta na 1960, ebe ha na-ejigide njikwa niile. Afọ ole na ole mgbe ọ nwụsịrị, ndị bi na Auroville nwere esemokwu na njikwa nke SAS. Na 1988, mgbe oge ọgba aghara gasịrị mgbe ndị bi na ya gwara Gọọmentị India ka ha tinye aka, ndị omeiwu India tinyere Iwu Auroville Foundation, n'okpuru nke Gọọmentị India weghaara ịchịkwa Auroville (Auroville Foundation Act 1988). Afọ anọ ka nke ahụ gasịrị gọọmentị nyere akụ nke Auroville na Auroville Foundation, nke mejupụtara Council Advisory Council, Kọmitii Na-achị Isi na Mgbakọ Ndị Bi na ya. Onye odeakwụkwọ a họpụtara gọọmenti na-elekọta ọrụ nke obodo. Ndị bi na ya na-anọchi anya ndị Kọmitii Na-arụ Ọrụ (Auroville Foundation nd). Ndị enyi mba ofesi nke Auroville haziela onwe ha na Auroville International, netwọkụ zuru ụwa ọnụ nke na-enyere aka kwado ọrụ ndị obodo (Auroville International nd). Ndị a gụnyere nnukwu usoro nchigharị, ịgbalị idozi nsogbu mmiri nke mpaghara ahụ, yana atụmatụ njikọta na obodo ndị agbata obi.
N'ime afọ ndị mbụ nke obodo ahụ ghọrọ ashram, ọ chere nsogbu ego na nsogbu ndị ọzọ sitere na Sri Aurobindo ịbịa French India dị ka onye gbara ọsọ ndụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'agbata afọ 1910 na 1936 ndị uwe ojii Britain hụrụ ya na ndị ibe ya n'ihi ọrụ ya mbụ dịka onye ndọrọndọrọ ọchịchị mgbagha. Uche a na-enweghị omume enyi mere ka o siere ha ike ịgagharị n'enweghị nsogbu ma ọ bụ ịnweta nkwado ego site n'aka ndị enyi. Gọọmentị France nabatara ọnụnọ ha mana gbochiri ụlọ ole ha ga-enweta. Pondicherry ghọrọ akụkụ nke Republic of India na 1962. Nke a emeghị ka nsogbu nsogbu nke ashram belata ozugbo, mana ka ọ na-erule 1990s, ọ nwetawo ego zuru oke iji nye ndị otu niile ezigbo ụlọ. Auroville nwetara oge dị nkpa site na 1975 ruo 1988, mgbe ndị obodo na-emegide SAS. Kemgbe ahụ, ọ nweela ike ịkwado ndị otu ya ma kwụọ ụgwọ ọrụ ya n'ihi onyinye sitere n'aka ndị enyi na enyemaka ego pere mpe n'aka gọọmentị India.
N'agbanyeghị nkwenye zuru oke n'etiti ndị òtù ashram na Auroville na ha na obodo ha na-erite uru site na nduzi ime mmụọ nke Sri Aurobindo na mama ahụ, enweghị ntụzịaka doro anya sitere na ndị mmadụ na-eme ka obodo abụọ ahụ meghee ụdị ọgba aghara dị iche iche. Mgbe mama m nwụsịrị na 1973 ndụ nke ashram gara n'ihu dịka nkuzi ya na Sri Aurobindo na omenala ndị obodo. Ndị mmadụ lere anya n'ime onwe ha maka nduzi. Senior sadhakas nyere mmụọ nsọ na ndụmọdụ. Ndị isi ngalaba wee kọọrọ ndị nlekọta ahụ, ndị iwu kwadoro ikpe esemokwu dị n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu na ịnagide ikpe enweghị isi. Ha mere ihe kachasị mma iji mee mkpebi ha dịka nkuzi na ihe atụ nke Sri Aurobindo na mama mana ekwughi na ha na-eme ihe n'okpuru nduzi ha. Site n'etiti 1990s, ndị otu ashram na-ewe iwe bụ ndị jụrụ ịnabata mkpebi nke onye nwe ụlọ ahụ malitere ịmalite otu nrụgide na ịmalite ikpe ikpe megide ndị nlekọta na ndị otu ọzọ. Ọtụtụ ikpe metụtara ihe ndị bara uru, dịka inye ego, ihe gbasara ịdọ aka ná ntị, na ihe ndị ọzọ. Ndị ọzọ metụtara ajụjụ nke nkwenkwe ma ọ bụ mmetụta. Otu ihe kpatara esemokwu bụ mbipụta ọhụrụ nke uri uri Sri Aurobindo Savitri . Dabere na nyochaa nke ihe odide ahụ, mbipụta ọhụrụ (1997) kpochapụrụ njehie ndị dabara n'ime ederede n'oge ogologo oge ederede, ịdekọ na akwụkwọ. Ụfọdụ sadhakas nwere nchegbu na ndozi ndị a bụ mgbanwe nke ederede a na-apụghị ịda ada, wee malite iwe iwe megide ndị editọ na ndị na-elekọta ụlọ ya wee mezie usoro iwu megide ha. Ikpe ahụ mechara gaa Courtlọikpe Kasị Elu nke India, nke kpebiri ịkwado ndị nlekọta ahụ. Okwu ọzọ metụtara akụkọ ndụ Sri Aurobindo nke onye otu ashram dere ma bipụta ya site n'aka ndị nta akụkọ mahadum America. Akwụkwọ ụfọdụ ahụ weere na ọ bụ iwu ụfọdụ n'ime na n'èzí ashram, bụ ndị gbara akwụkwọ ọtụtụ akwụkwọ, onye dere ya, na ndị na-elekọta ya, bụ ndị e boro ebubo na ha bu “onye na-ekweghị ekwe” agha. Bylọikpe Kasị Elu kagburu ikpe ahụ megide ndị nlekọta ụlọ ahụ na 2016 mgbe afọ ise na ọkara gachara. N'ime oge a, ndị otu nke nghọtahie guzobere otu na-ezighi ezi iji kwalite ọdịmma ha, ebe ndị na-eguzosi ike n'ihe nye ndị na-elekọta ụlọ guzobere otu iji kwado ha. Ọnọdụ ahụ dugara n'ịkọwapụta enweghị atụ nke ndụ obodo ashram (Heehs 2015). Agbanyeghị na ụlọ ikpe dị elu na-ekpekarị ashram ikpe, ndị isi nke ndị otu mgbagha chọpụtara na ọ dị mfe ịmalite ikpe ikpe, si otú a na-emebi ikike nke ntụkwasị obi.
Auroville ga-agabigakwa nchịkwa nke esemokwu iwu. Na 1975, otu ìgwè nke ndị Auroville, ndị SAS na-echegbu onwe ha, na-edeba aha ọhụrụ nke a kpọrọ Auroville Residents Association. SAS gbara akwụkwọ ka o nye gị iwu na-adịgide adịgide megide ìgwè a. Mgbe ọtụtụ afọ nke usoro iwu kwadoro nke ọma, Gọọmenti India tinyere aka. Na December 1980, ndị omeiwu India kwadoro iwu Auroville (Mmepụta Mberede), bụ nke nyere gọọmenti ikike iji nweta oge Auroville. SAS gbara aka n'omume ikpe n'ụlọikpe, na-ekwu na Auroville bụ òtù okpukpe, ya mere, gọọmentị enweghị ikike ịgbochi ya. Afọ abụọ ka e mesịrị, Ụlọikpe Kasị Elu kpebiri n'okwu a, na-ekwu na Sri Aurobindo na Nne kwupụtara n'ụzọ doro anya na ọrụ ha bụ okpukpe, ya mere, Auroville Act nwere ike iguzo (Minor 1999; Heehs 2013). Ebe ọ bụ na iwu Auroville Foundation Act nke 1988, gọọmentị anọwo na-achịkwa Auroville kpọmkwem. Nke a egbochila ụdị nsogbu ndị nwere nsogbu nke ashram mgbe 1997 gasịrị, ma emeela ka ụjọ jide na gọọmentị nwere ike ịme Auroville dịka ọrụ gọọmenti nkịtị kama ịnwe nnwale ime mmụọ. N'eziokwu, ndị ọrụ gọọmenti egosila njikere dị ịrịba ama iji mee ka obodo ahụ nwee ike ịzụlite ya.
Ọ bụ ezie na ọganihu ya na-adị ndụ n'ime afọ iri anọ na asatọ ya dịtụbeghị ka ọ na-agbagha ma na-agba ọtụtụ ọrụ ndị meworo ka ọ baa uru obodo na obodo ndị gbara ya gburugburu na gburugburu ebe obibi, Auroville abịaghị ebe dị nso na ndị 50,000 a na-atụ anya nke mama m kwuru banyere n'oge 1960. O siri ike na obodo ga-enweta ala niile mama m kwadoro ka ọ na-eme obodo na gburugburu greenbelt, ndị ọkachamara ewepụla ala ahịa ruo n'ókè dị egwu. Obodo ndị dị gburugburu obodo ahụ aghọwo ọnyà ndị njem nlegharị anya nke na-eguzogide dị iche iche na ebe obibi nke Auroville nke ọma, nke na-ahụ maka ya. Ka o sina dị, Auroville na ashram na-anọgide na-enwe ọganihu obodo ndị na-adọta ndị ọbịa si gburugburu ụwa.
Foto #1: Foto nke Aurobindo Ghose (n'etiti oche) na ndị mụrụ ya na nwanne ya na London, 1879.
Image #2: Foto nke Aurobindo Ghose dị ka nchịkọta akụkọ nke Bande Mataram, otu akwụkwọ akụkọ nationalist a ma ama nke e bipụtara n'asụsụ Bekee site na Calcutta, 1907.
Foto #3: Foto nke Nne na Japan, gburugburu 1916.
Foto #4: Foto dị ugbu a nke isi ụlọ Sri Aurobindo Ashram.
Foto #5: Foto Sri Aurobindo na mama na-enye darshan, April 1950.
Foto #6: Foto nke Matrimandir, ụlọ ntụgharị uche nke mama m kpọrọ "mkpụrụ obi nke Auroville."
Image #7: Foto nke otu ụlọ na Auroville.
Aurobindo, Sri. 2013. Akwụkwọ edemede Yoga II. Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department. Iwu Auroville Foundation. 1988. Nweta site na http://www.auroville.org/contents/540 na 20 May 2015
Aurobindo, Sri. 2011. Akwụkwọ edemede banyere onwe ya na Ashram. Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department.
Aurobindo, Sri. 2006. Ihe ndekọ nke onwe na ihe odide ndị ọzọ nke Mmasị Akụkọ Ihe Mere Eme. Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department.
Aurobindo, Sri. 2005. Ndụ nke Ndụ. Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department.
Aurobindo, Sri. 2001. Ihe ndekọ Yoga . Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department.
Aurobindo, Sri. 1999. Njiko nke Yoga. Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department.
Aurobindo, Sri. 1997a. Ihe Odighi nke Chineke na Mmadu: Ihe odide sitere na akwukwo ederede 1910-1950. Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department.
Aurobindo, Sri. 1997. Savitri: Akụkọ ihe mere eme na ihe atụ. Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department.
Auroville Foundation nd Nweta site na http://www.auroville.org/contents/572 on 20 Ka 2016.
Auroville International nd Accessed from http://www.auroville-international.org/ na 20 May 2016.
Ọnụ ọgụgụ - Auroville Population, January 2016. Nweta site na http://www.auroville.org/contents/3329 na 20 May 2016.
Heehs, Peter. 2015. Sri Aurobindo Ashram 1910-2010: Akụkọ Na-adịghị agwụcha. Nova Religio 19: 65-86.
Heehs, Peter. 2013. "Ọ bụghị ajụjụ nke nkà mmụta okpukpe"? Okpukpe, Okpukpe na Ụlọikpe na India. Akụkọ gbasara iwu gbasara ọnụ 1: 243-61.
Heehs, Peter. 2011. "Kabbalah, Philosophie Cosmique, na Yoga zuru ezu: Ọmụmụ ihe na Cross-Cultural Influence." Aries 11: 219-47.
Heehs, Peter. 2008. Ndụ nke Sri Aurobindo. New York: Ụlọ ọrụ University Press.
Huss, Boaz. 2015. "Nwaanyị Thine, Alta Una, Nne Na-elekọta: Mary na Ware (1839-1908)." Aries 15: 210-46.
Nta, Robert N. 1999. Okpukpe, nke Ime Mmụọ na nke Ala: Auroville na Ala India. Albany, NY: SUNY Press.
Mama, na (Mirra Alfassa). 2004. Okwu nne - I. Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department.
Mama, na (Mirra Alfassa). 1979-1982. Ebumnuche Nne. Nkeji iri na atọ. New York: Institute for Research Evolutionary.
Miller, Barbara Stoller, trans. 1998. Yoga: Ịdọ aka ná ntị banyere nnwere onwe: Yoga Sutra nke a kpọrọ Patanjali. New York: Akwụkwọ Bantam.
Roebuck, Valerie J.. 2003. Ndị Upanishads. London: Penguin Books.